चिनियाँ पर्यटकको अनुभवः मायालु नेपाली, काठमाडौंमै डरलाग्दा खाल्डा - म्यागेजिन - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
लक्ष्मी लम्साल बेइजिङ २ पुस
काठमाडौंमा छङ् ख सिन्
‘नेपाली सारै मायालु। तर राजधानी ... नढाँटी भन्नुपर्दा निकै पिछडिएको। ठ्याक्कै चिनियाँ भाषामा भन्नुपर्दा ‘चाङ् ल्वान् छा’ अर्थात् साह्रै फोहोर र अस्तव्यस्त। सतहीपना ज्यादा।’
‘त्येन पो’– एउटा शब्द बारम्बार दोहोरिरहेको चाल पाएँ मैले।
पहिला त उनीसँग अंग्रेजीमा संवाद गर्ने सहमति भएको थियो। तर उनले अंग्रेजी पनि कनीकुथी बोल्न थालेपछि मैले नै चिनियाँमा बोल्न अनुरोध गरें। संवादका क्रममा जब उनले पटक पटक ‘त्येन पो’ ‘त्येन पो’ भन्न थालिन्, उनलाई दिएको सुविधाले उल्टै आफैंलाई पो अलमलमा पार्ने भयो। ‘त्येन पो’ शब्दको अर्थ नजानेर।
बेइजिङमा चिसोको तापमान उकालो चढ्दै माइनस १० डिग्री नाघ्दै थियो। तसर्थ मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष भेट्न जानु पनि सकस। तब वीच्याटमै वार्ता गर्ने चाँजोपाँचो मिलाइयो। दूरीका हिसाबले बेइजिङदेखि झण्डै ३०० किलोमिटर टाढा थिइन् उनी। यस वर्षको जुलाई अर्थात् साउनतिर उनी नेपाल गएकी रहिछन्। नेपाल अनुभव साट्नका लागि अनुरोध गरेपछि उनी राजी भइन् तर उनको टुट्फुट् अंग्रेजीभन्दा आफ्नो अधकल्चो माण्डारिनले काम चलाउन उचित ठानें।
स्कूले बच्चाको विदाको मौका पारेर ४० वर्षीया डा. छङ् ख सिन् अर्थात् बोलाउने नाउँ छङछङ हपैबाट दक्षिण युन्नान प्रान्त हुँदै काठमाडौं झरेकी रहिछन्, गत जुलाई महिनाको अन्ततिर। उनको यात्रामा साथी थिए, बुढी आमा र छोरी। एकजना नेपाली साथीको प्रेरणाले नेपाल रोजेकी थिइन्। भनिन्, ‘नेपाल कस्तो रहेछ भनेर बुझ्न मन लाग्यो, पहिलादेखि नै नेपालबारे सुनेकी थिएँ।’
नेपाली साथीका कारण नेपालप्रतिको भावना गहन थियो उनमा। नेपाल टेक्नेबित्तिकै अनेकन् ‘त्येन पो’ पार गर्दै उनी चितवनमा हात्ती चढिन्, पोखरामा डुंगा तैरिइन् र ‘ना–च्या–खो–थ’ पुगिन्। मेरो अनुमानमा त्यो नगरकोट हुनुपर्छ। उनले पुनः स्मृतिमा गएर भन्न थालिन्, ‘नेपालको प्राकृतिक रंग सुनौलो छ। अझ साँझ ४–५ बजेतिरको गोधुली साँझको दृश्य देख्दा कहाँ हो, कहाँ पुगेजस्तो लाग्ने। हात्तीहरू पनि कति चलाख, हेर न। प्राकृतिक वनजंगल, प्राकृतिक खेतबारी, निकै रमणीय।’
छङछङ आफैं पनि अंग्रेजी खुट्याउन त सक्थिन् तर अलि धेरै अलमल गर्थिन्। जापान, युरोप र अमेरिकी मुलुक घुमिसकेकी छङछङलाई नेपालमा फरक के पाइयो भनेर सोध्दै गर्दा पछाडि बसेका दुई बच्चामध्ये छोरीले प्याच्च अंग्रेजी शब्द उच्चारण गरेर कुराकानीमा अवरोध लगाइदिइन्। शायद मेरो माण्डारिन स्तरीय थिएन र आमाको अलमल सुल्झाउन खोज्दैथिइन्। पृष्ठभूमिमा बच्चाहरू हाहा हुहु गरेर हाँसखेल गरिरहेको सुनिन्थ्यो।
छङछङले भनिन्, ‘छेउमा मेरी छोरी छन्, ए नबोल त ... ।’
तर जब छङछङ मसित बोल्न थाल्थिन्, बीचमा बच्चाहरू जिस्किइरहेको सुनिन्थ्यो।
नेपालमा भोगेको नमीठो पल खोतल्न अनुरोध गरेपछि उनी एक हल्को हाँसिन्। छोरीलाई फोन दिइन्, ‘ल तिमी भन त।’
छोरीले प्रायः नेपालमा पानी पर्ने र फेरि दिन खुल्ने गरेको सुनाउँदै पटक पटक त्यस्तो भएपछि दिक्क लागेको बताइन्।
मैले भनें, ‘यो त प्राकृतिक कुरा हो नि।’
छङछङले छोरीको हातबाट मोबाइल खोसेर फेरि आफैं सही थापिन्, ‘त्यही त भन्या, यो प्राकृतिक कुरा हो, जलवायु मानिसले चाहेर बदल्न सक्ने कुरै भएन नि।’
पहिलो पटक नेपाल जाँदा गोही, गैंडा सबै प्राकृतिक चीजहरू नजीकैबाट नियाल्न पाएको कुराले घत पार्यो उनलाई। उनी थप्दै गइन्, ‘स्थानीयवासी सारै मायालु। तर नेपालको राजधानी ... नढाँटी भन्नुपर्दा निकै पिछडिएको। ठ्याक्कै चिनियाँ भाषामा भन्नुपर्दा ‘चाङ् ल्वान् छा’ अर्थात् साह्रै फोहर र अस्तव्यस्त। सतहीपना ज्यादा।’
नेपाल यात्राका क्रममा खिचेका केही तस्वीर मागेपछि उनले काठमाडौंलाई ६०–७० वर्षअघिको चीनसँग दाँजिन्। त्यसो त बिजुलीका तारहरू भूमिगत गर्न बाँकी छ। शहरलाई कुरूप बनाउने यस्ता तारहरू देखेर उनले थपिन्, ‘राजधानी जस्तो ठाउँमा तारैतार ... ६–७ दशकअघिको चीनजस्तै। तर पनि मानिसहरू धेरै दयावान्, शायद संयोगले दयालु मात्रै भेटिएर पो हो कि?’
आलोचना गर्दागर्दै नेपाली मनमा ठेस नलागोस् भनेर हुनसक्छ, उनले बेलाबेला ‘नेपालीहरू मायालु’ भन्न छुटाइनन्। जम्मा १० दिनको छुट्टी मनाउन हिँडेकी छङछङको २ दिन त बाटोमै गयो। एक साता बढीको समय पोखरा र चितवनमै सक्किइहाल्यो। उनले हिमाल र लुम्बिनीसम्म पुग्ने समय नै पाइनन्। अर्को पटक फेरि नेपाल जाने धोको रहेछ उनको।
‘भूगोलका हिसाबले नेपाल ठूलो मुलुक त होइन, कसरी घुम्न भ्याइएन?’
जिज्ञासामा उनी निराश सुनिइन्, ‘नेपालको सबैभन्दा कहालीलाग्दो त यातायात रहेछ। सुन्दर दृश्यावली भएका गन्तव्य टाढा टाढा छन्, त्यो स्वीकार्न सकिन्छ तर बाटो साँच्चिकै भएन के। यताउता जान खोज्यो, बाटोकै तनाव।’
संसारका विभिन्न देशमा पुगेका अधिकांश पर्यटकले नेपालीको सरल जीवनशैलीको तारिफ गर्छन्। नेपालीहरूको आतिथ्य सत्कार हार्दिक छ र मेला महोत्सवमय जस्तै लाग्छ। मानिसहरू मैत्रीपूर्ण हुन्छन्। यहाँ शान्ति र वास्तविकताको अनुभव गर्न सकिन्छ। अर्थपूर्ण र दैनिक सक्रिय जीवनशैली बाँच्न सकिन्छ। तर यति सरल मान्छेहरू भएको ठाउँमा बाटोघाटो चाहिं ज्यानमारा लाग्छ। श्रीमती छङछङमा नेपालका डरलाग्दा सडकको धङ्धङ्गी अझै बाँकी नै रहेछ।
उनले भनिन्, ‘नेपाल घुम्न धेरै समय चाहिने रहेछ। यी खतरनाक खाल्डा पार गर्नु मुश्किल छ। (अझै चर्किएर) भएन के, तिमीहरूको राजधानीकै बाटो पनि कति टीठलाग्दो। कुन शब्दमा भन्ने? तर धेरै पिछडिएको जस्तो लाग्यो। शायद मैले गहिरो रूपमा नेपाललाई नबुझेको पनि हुनसक्छ।’
आर्थिक व्यवस्थापनका हिसावले नेपाल गरीब मुलुक हो तर पर्यटनको धनी। यहाँ किन्न सकिने विश्व ब्राण्डेड वस्तुहरू कम छन्। जापान, युरोप, अमेरिकामा गएकाले पनि हुनसक्छ, नेपालको व्यापारिक वस्तुमा प्रचुरता देखिनन् उनले।
‘नेपाली हस्तकलाका सामग्रीहरू त ठीकै हो’, छङछङले भनिन्।
इमेजिङ् डायग्नोटिक्स श्रीमती छङछङको फेरि नेपाल घुम्ने चाहना छ। नेपालको राजधानीमा जताजतै खाल्डाखुल्डी भएर जनजीवन तहसनहस भएको धेरैले सुनेको हुनुपर्छ। राज्यसंयन्त्रमा भएकाहरूले पनि ‘खाल्डा यो सरकारले बनाएको हो र?’ आशयका उट्पट्याङ जवाफ दिएको पनि सुनेको हुनुपर्छ। मेयरले सुनेको नसुन्यै गरेको अनि तिनै खाल्डामा साइकलयात्रीले ज्यान गुमाएको सम्झिएको हुनुपर्छ। खाल्डा पुर्न सरकारले बारम्बार निर्देशन दिइरहन्छ।
तर एक पटक तिनै खतरनाक खाल्डाखुल्डी भोगेकी यी चिनियाँ पर्यटक फेरि नेपाल गइन् भने त्यस्ता खाल्डाहरू त्यस्तै हुँदा हुन् वा पुरिएका हुँदा हुन्?
छङछङसँग लामो वार्ताको क्रममा थाहा भयो, चिनियाँमा उनले पटक पटक दोहोर्याएको शब्द ‘त्येन पो’ को अर्थ त खाल्डाखुल्डी पो रहेछ।
प्रकाशित २ पुस २०७५, सोमबार | 2018-12-17 09:40:47